Ahụ mgbu na azụ (azụ mgbu) [Akwa ndu iji nyere aka megide mgbu azụ]
Ihe mgbu na azu (azu mgbu)
Mgbu na azụ na azụ mgbu bụ ihe jọrọ njọ! Igha azu na-eme ka ụbọchị anwụ mara mma bụrụ ihe dị egwu. N’isiokwu a, anyị chọrọ inyere gị aka ka gị na ya bụrụ enyi ọzọ!
N'ebe a, ị ga -ahụ ezigbo ozi ga -enyere gị aka ịghọta ihe mere ị na -eji alata azụ azụ yana ihe ị ga -eme maka ya. N'okpuru isiokwu a, ị ga-ahụkwa mmega ahụ (gụnyere vidiyo) yana ihe akpọrọ "nnukwu ihe" ma ọ bụrụ na azụ gị atụgharịala kpamkpam. Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị Facebook ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ntinye.
Nime akụkọ a, ị nwere ike gụọ maka ọtụtụ isiokwu, gụnyere:
Ihe na-akpatakarị mgbu azụ
Nchọpụta enwere ike ịchọta mgbu azụ
Ihe mgbaàmà nke mgbu azụ
Ọgwụgwọ mgbu azụ
Mmega na ọzụzụ
Ajuju ajuju banyere azu azu
Onwe-ọgwụgwọ: Kedu ihe m ga - eme ọbụla maka azụ mgbu?
Otu ihe kacha mkpa ị na-eme mgbe ị na-enwe ihe mgbu azụ bụ ịnọgide na-aga n'ihu. Ije ije na mmega ahụ dị nwayọ nwere ike inyere gị aka mee ka akwara dị nwayọ na nkwonkwo siri ike. Agbanyeghị, anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị nagide ihe mgbu ogologo oge, ebe nke a nwere ike ibute ma nsogbu na nsogbu ndị ọzọ siri ike. Chọọ enyemaka ọkachamara (chiropractor ma ọ bụ physiotherapist) ma ọ bụrụ na ị nwere mgbu azụ ogologo oge.
Zọ nke ihe ndị ọzọ nwere ike ịgụnye iji trigger ebe / ịhịa aka n'ahụ bọọlụ, nkuzi na akwa knitwear (ihe mgbochi bụ isi), akpụkpọ anụ ahụ jụrụ oyi (dịka. Ihe nraghachi azụ) ma ọ bụ ojiji nke ijikọtara ikpo ọkụ / mbukota oyi. Ihe kachasị mkpa bụ na ị ga-eji ihe mgbu ahụ kpọrọ ihe ma mee ihe gbasara ya.
Ọzọkwa gụ: - Omume ndị a I Kwesịrị Knowmara Na Nnukwu Mgbu Na-akpata
Azụ Mgbu na azụ Na-emetụta 80% nke ndị Norway
Mgbu azụ bụ nsogbu na-emetụta ihe ruru 80% nke ndị bi na Norwegian. N'ime otu afọ, ihe dịka ọkara n'ime anyị enweela mgbu mgbu, ihe dịka 15% na-enwekwa mgbu na-adịghị ala ala. Nke a bụ nchoputa nke nwere nnukwu mmekọrịta akụ na ụba na akụ na ụba maka Norway - yabụ gịnị kpatara na ị gaghị elekwasị anya na usoro mgbochi?
Ihe Na - ebutekarị nsogbu mgbu
Ihe kachasị akpata mgbu azụ bụ n'ihi akwara ike (nkwonkwo nkwonkwo) na nkwonkwo na-emegharị ala (mkpọchi). Mgbe malfunction ahụ buru oke ibu ọ ga-ebute mgbu na arụ ọrụ, yana mgbakasị akwara ndị dị nso. Anyị si otu a chịkọta isi ihe atọ:
Akwara Ugwu Dysfunctional
Malfunction na Joints
Can nwere ike iche banyere ya dị ka gia nke na-agagharị na ihe eji arụ ọrụ - ọ ga-agbanwe etu ị si arụ ọrụ wee si otú a mebie usoro ndị ọrụ ahụ. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịgwọ akwara na nkwonkwo mgbe ị na-arụ ọrụ iji belata mgbu azụ.
Nchọpụta Pụrụ Iche nke Pụrụ Inyere Gị Aka Mgbu
N'ime ndepụta dị n'okpuru, anyị gafere ọtụtụ nchọpụta dị iche iche nwere ike ibute mgbu azụ. Somefọdụ bụ ọrịa arụ ọrụ na ndị ọzọ abụrụ usoro.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo (Ọrịa ogbu)
Erector spinae (azu n’azu) akpalite isi
Gluteus medius myalgia / trigger point (akwara oche nwere ike inye aka na mgbu azụ)
Joint mkpuchi na azụ ala, obi, ọgịrịga na / ma ọ bụ n'etiti UM UBARA (interscapular)
muscle mara akpụ / myalgia na azu:
Ọrụ ihe mkpali ga - eme ka mgbu na - egbu mgbu oge niile site na akwara (dịka. quadratus lumborum / azụ na-agbatị myalgia)
Isi ihe isiokwu na-enye mgbu site na nrụgide, ọrụ na nje
Prolapse nke ala azụ
scoliosis (n'ihi ntụgharị spain, akwara na nkwonkwo nwere ike ibu ibu)
Ọkpụkpụ akwara nke ala azụ
Yabụ na nchịkọta, enwere ọtụtụ ihe nwere ike ibute ọrịa na nyocha maka mgbu azụ gị. Ihe kachasị bụ n'ihi nrụgide akwara, nkwonkwo akwara na mgbakasị akwara metụtara. Kpọtụrụ chiropractor ma ọ bụ physiotherapist ka ị nyochaa mgbu azụ gị ma ọ bụrụ na ha ahapụghị onwe ha.
Ajuju ajuju banyere oria nke azu mgbu
Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ anyị ajụla anyị ajụjụ gbasara mgbu azụ kemgbe ọtụtụ afọ - anyị emeela ike anyị niile ịza ha. N'ime ndepụta dị n'okpuru ị nwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime mgbaàmà ndị mmadụ na-enwe na mgbu azụ na ihe ndị na-akpata nsogbu.
Mgbu n’azu n’ihi nsọ nwanyị
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enwe azụ na afọ mgbu n'oge nsọ nwanyị. Ihe mgbu ndị a nwere ike ịbịakarị ma mee ka ahụ ahụ ghara ịdị njọ. Nke a bụ n'ihi mgbanwe nke homonụ na nsogbu ahụ ike.
Gbalịa ịchọta ọnọdụ enyemaka - ọnọdụ mberede - dịka ọmụmaatụ dina ala ma tinye ụkwụ gị n'elu oche. Ma ọ bụ n'akụkụ n'akụkụ ụkwụ gị dọtara gaa n'ebe ị nọ n'ọnọdụ nwa ebu n'afọ - na ohiri isi n'etiti ikpere gị. N’ebe ndị a, nrụgide pere mpe ga-ekwe omume n’azụ na afọ ga-ekwe omume.
Ahụ mgbu na azụ nke nrụgide
Ọtụtụ mmadụ na-enwe mmekọrịta chiri anya n'etiti nrụgide na azụ mgbu. Nke a bụ n'ihi na nrụgide nwere ike itinye aka na akwara anụ ahụ nke na aka nke nwere ike ibute azụ, olu ma ọ bụ ọbụna isi ọwụwa. Mgbatị, mmega ahụ, yoga na ịgbatị ahụ bụcha ọgwụgwọ bara uru maka uru akwara na-emetụta nrụgide na ọkpụkpụ.
Mgbu n’azụ Tempur
Ọtụtụ mmadụ na-enwe nkụda mmụọ mgbe ha zụtara ohiri isi dị ala ma ọ bụ akwa ụra tempur - naanị iji hụ na mgbu ahụ adịghị akawanye mma, kama ọ ka njọ. Nke a bụ n'ihi na osisi tempresses na ohiri isi na-adịghị adabara azụ na olu niile. N'ezie, ị nwere ihe ọghọm nke ị dinara n'ọnọdụ a kpọchiri akpọchi n'abalị niile, nke a na - ebute nsogbu mgbe niile na otu mpaghara - nke a pụtara na mpaghara a anaghị enweta mgbake ọ chọrọ, nke nwere ike iduga azụ mgbu. Nnyocha egosila na Ihichapụ ohiri isi abụghị ihe kachasị mma ị nwere ike ịrahụ ụra na olu mgbu - nakwa na ị nwere ike izere mgbu olu na isi ọwụwa site na-agbanwe ohiri isi
Mgbu na azụ site na iguzo ogologo
Ọtụtụ ndị nne na nna na-enwe ahụ ụfụ site na iguzo n'akụkụ ma na-ele ka ụmụ ha na-egwu bọl. Iguzo ọtọ na ala ruo ogologo oge na-etinye ibu otu akụkụ na azụ, n'otu ụzọ ahụ dị ka ịnọdụ ọdụ ọnọdụ, n'ikpeazụ ọ nwere ike ịmalite mgbu na akwara ma ị nwere mmetụta siri ike ma sie ike. Nke a nwere ike igosi obere akwara kachasị - ọkachasị mọzụ azụ miri emi - ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ na nkwonkwo na akwara.
Mgbu na azu mgbe emechara
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ghara inwe obi ụtọ na ọzụzụ - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na gị onwe gị chere na ị nwere usoro dị mma mgbe ị na-eme mmemme ahụ niile. O di nwute, n'oge nkuzi, enweghi ike ime ihe obula ma obu bufee ihe. Nke a nwere ike ịdakwasị ndị a zụrụ azụ yana ndị ka malitere ọzụzụ. Mgbu na nkwonkwo nwere ike ịkpata ihe mgbu ma ọ bụrụ na ha eche na ị na-etinye mmerụ ahụ na ha ọ bụla. Ndị na-agwọ ọrịa ahụ na ndị na-eme ka ndị na-ahụ maka mgbatị ahụ na-ahụkarị ndị buliri onwe ha elu ma ọ bụ na-ebuli ikpere, n'ihi na ndị a chọrọ obere mgbanwe site na usoro nkịtị iji nye gị mgbu. Nduzi mmega, zuo ike site na omume egosiputara na ogwu bu ihe nile g’enyere gi aka.
Mgbu na azụ m ka m na-eche ihu
Dị ọcha biomechanically, ọ bụ azụ tensioners na ala nkwonkwo na-aka ke n'ihu ekwe. Ya mere, ọ nwere ike igosi nkwụsịtụ na azụ ala - n'otu oge ahụ ọ nwekwara ike ime na iyatesịt akwara ma ọ bụ prolapse.
Azụ mgbu mgbe m na-arịa ọrịa
Ọtụtụ mmadụ na-ahụ na azụ mgbu na-aka njọ mgbe ha na-arịa ọrịa. Dị ka ọtụtụ mmadụ maara, nje, gụnyere flu, nwere ike ime ka nkwonkwo na olu mgbu na-agbasa ahụ niile. Zuo ike, mmiri ị extraụ mmiri na vitamin C so n’ihe ndị nwere ike inyere gị aka.
Mgbu na azụ m mgbe m na-amali elu
Jumping bụ mmega ahụ na - achọ mmegharị n'etiti akwara na nkwonkwo. Myalgia na mmachi mgbochi nwere ike na-egbu mgbu. Ọ bụrụ na ihe mgbu ahụ na-apụta naanị mgbe ị na-agbada, ọ nwere ike igosi na ị nwere mgbakasị ahụ na azụ azụ.
Akpịrị Azụ Mgbe M Dina Ala
N’ime ụdị a, ọtụtụ ndị nwere afọ ime na-aga n’ihu ma ọ bụ nke gara aga ga-amata onwe ha. Beingkpakarị azụ na azụ mgbe ị dina ala na-ejikọkarị ya na nkwonkwo pelvic.
Ọ bụrụ na ị nwere obere azụ mgbu mgbe ị na-edina ala nke a nwere ike igosi pelvic dysfunction, jikọtara ya na lumbar na gluteal myalgias. karịsịa Ime amụbaala ihe mgbu azụ Mgbe ị dinara ala, nke a na - emetụtakarị na pelvis belata yana ọrụ azụ.
Mgbu na azụ m mgbe m na-eku ume
Mgbe anyị na-eku ume, obi na-agbasawanye - nkwonkwo na azụ na-agagharị. Igbachi na ọgịrịga mgbakwunye na-abụkarị ihe na-akpata n'ibu iku ume mgbu.
Mgbu na azụ mgbe enwere ike ime iku ume ngụgụ tinyere nkwarụ akwara na uru ọgịrịga yana eriri afọ. Typesdị ọrịa ndị a na - abụkarị na igbe / etiti azụ ma na - ebute mgbu na - egbu mgbu.
Mgbu na azụ m mgbe m nọdụrụ ala
Nọdụ ala na-etinye ibu dị oke elu na azụ ala. Ọnọdụ ịnọdụ ala na-enye n'etiti nrụgide kachasị elu ị nwere ike nweta megide ala azụ - nke a nwere ike karịa oge iwe na nkwonkwo, akwara, diski na akwara.
Ọ bụrụ na ịnwere ọrụ ọfịs, a na-atụ aro ka ị were ọtụtụ nkwụsịtụ obere ụbọchị ọrụ iji wepụ nrụgide azụ na olu gị - yana ị na-arụsi ọrụ ike na ọrụ nro na oge gị n'efu.
Mgbu n’azụ mgbe ị na-a breastụ ara
Ara ara siri ike na azụ. Ara na-eme na a static ọnọdụ na-ewepụta nje na ụfọdụ ebe nke azụ. Karịsịa azụ azụ, olu na n'agbata ubu bụ akụkụ nke nwere ike na-egbu mgbu mgbe ị na-enye ara ara - ma na-enye ihe omimi miri emi, na-ere ọkụ ma na-egbu mgbu.
A na-emekwa ara maka oge niile ka ibu na mpaghara ahụ na-abawanye ma na-abawanye, na-enweghị nkwụghachi zuru oke maka akwara ma ọ bụ nkwonkwo. Mmezi mmezi, mmega ahụ, inye nwa ara na ịgbatị onwe ha niile nwere ike ịbụ uru bara uru.
Mgbu na azụ na ebe ndị ọzọ
Ọtụtụ na-ahụkwa na na mgbakwunye na ịnwe mgbu, ha na-enwekwa ihe mgbu n'akụkụ ọzọ nke ahụ - ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị gụnyere:
Mgbu na azụ na ụkwụ
Mgbu na azụ na pelvis
Mgbu na azụ na ukwu
Mgbu na azụ na apata ụkwụ
Mgbu na azụ na ọdụ akwara
A na-enwekarị ike ịkọwa ihe mgbu azụ ma ọ bụrụ na enwekwara mgbakasị ahụ - nke nwere ike ime n'ihi mmerụ diski (ntụgharị diski ma ọ bụ prolapse) ma ọ bụ nkwụsị na akwara na nkwonkwo.
Ọgwụgwọ mgbu Mgbu
Anyị na-atụ aro ka ị chọọ nyocha ahụike na ọgwụgwọ naanị maka azụ mgbu gị na onye ọrụ ahụike ọha na-ahụ maka ọkachamara na akwara na mgbu. Nke a bụ n'ihi na ndị amamịghe a dị n'okpuru enyemaka HELFO ma yabụ ma a na-echekwa ikikere ndị a ahaziri iche, ma na-achịkwa usoro agụmakwụkwọ na iru ikike ahụ.
Ọrụ atọ ndị enyere ikike n’ihu ọha bụ chiropractor, physiotherapist na therapist therapist. Ọrụ ndị a bu ụzọ mesoo nsogbu anụ ahụ na usoro ọgwụgwọ ndị a:
Usoro akwara erughị ala
Ọkpụkpọ anụ ahụ Tendon
Mmega na Nkuzi Nduzi
Techniqueszọ ndị ọzọ ejiri, dabere na ahụmịhe nke onye ahụ, nwere ike ịgụnye:
Acupuncture intramuscular (agịga kpọrọ nkụ)
Usoro ọgwụgwọ Laser Musculoskeletal
Want chọrọ enyemaka ịchọta dọkịta na-atụ aro ka nọ nso gị? Kpọtụrụ anyị ma anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
[button id = »» style = »jupụtara-obere» klas = »» align = »center» njikọ = »https://www.vondt.net/vondtklinikkene/» linkTarget = »_ self» bgColor = »accent2 ″ hover_color = »Accent1 ″ font =» 24 ″ icon = »ebe1 ″ icon_placement =» aka ekpe »icon_color =» »] Chọta onye njikwa [/ button]
Mmega na ọzụzụ megide azụ mgbu
Nnyocha kwuru ya - onye ọ bụla ị maara na-ekwu ya. Mmega ahụ na mmega ahụ dị mma maka azụ gị. Mana oge ụfọdụ ọ nwere ike isiri anyị ike ịlụ ọgụ dị elu n'ọnụ ụzọ - anyị niile maara nke ahụ.
Nke bụ eziokwu bụ na, mgbatị ahụ na mmega ahụ nwere nnukwu uru n'ibelata ihe mgbu azụ ma melite ọrụ gị. Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na obere mgbu azụ? nleta Ọwa Youtube anyị (pịa ebe a) ma hụ usoro ọzụzụ ọzụzụ niile anyị na-enye ebe ahụ. Dị ka vidiyo ọzụzụ a megide akwara azụ.
VIDIO: Ihe omume 5 na-emegide akwara ike
Na vidiyo dị n’elu ị nwere ike ịhụ mmega mmega ahụ dị mma chiropractor Alexander Andorff nke nwere ike inyere gị aka belata mgbu azụ gị. Nwere onwe gị ịdenye aha na ọwa YouTube anyị (njikọ ahụ na-emepe na windo ọhụrụ) maka mmemme mmega ahụ na-akwụghị ụgwọ dịka nke a.
Isi - Mmega ahụ na mmega ahụ maka mgbu azụ na mgbu azụ
5 Ezigbo Ahụ Ike Megide Sciatica
5 Yoga Mmega megide Back Stiffness
6 Omume maka Nnukwu Mgbu Ọrịa
Ndụmọdụ ime ihe ike megide Pain na azụ
Na ngwụcha ngwụcha nke ihe anyị guzosiri ike - ọgwụgwọ na ndụmọdụ metụtara nyocha - anyị na-achọta ndụmọdụ ụmụ nwanyị ochie. Offọdụ n'ime ha nwere okpuru ihe n'ihe nwere ike inyere aka, kamakwa ụfọdụ ihe mara ezigbo mma.
A na-ezigara anyị ihe a na-akpọ ndụmọdụ ụmụ nwanyị ochie na ihe nwere ike inye aka na ụdị mgbu na ọrịa dị iche iche. N’ọtụtụ isiokwu anyị, anyị ahọrọla iji ụfọdụ na-atọ ọchị bipụta ụfọdụ n’ime ha, ma jụọ ka a ghara iji ha kpọrọ ihe - kama ọ bụ ka ha nye gị ezigbo ọchị ebe ị na-anọdụ n’azụ.
Ọgwụ: Onion maka azụ mgbu
Ndị otu kansụl na-aga dịka ndị a. I kewara yabasị na ọkara tupu i ghapu otu ọkara megide akụkụ nke na-egbu mgbu na azụ. A na-ekwu na mkpụrụ osisi yabasị n’onwe ya na-arụ ọrụ na-egbu mgbu. N'aka nke ọzọ, anyị nwere obi abụọ ma eleghị anya na-eche na nke a ga - enye gị azụ mgbu na-enweghị isi na-esi isi nke eyịm raw. Ụtọ.
Ndụmọdụ ndị nọọsụ: Molọ maka azụ mgbu
Ee, ị gụrụ ikike ahụ. Otu n'ime aro ndị kachasị nke ezitere anyị bụ ka anyị sie decoction nke anthill (ọkacha mma anthill nwụrụ dịka onye nyefere ya dere ter) na mmiri. A ga-etinyezi decoction ahụ n’azụ. Biko, emela ihe a.
Ọgwụ: Akpa rọba maka azụ mgbu
O nwere ike ịbụ na ị chere na plastik bụ ihe otiti na nsogbu nye ọdịdị anyị? Ọfọn, ọ bụghị dị ka onye ntinye a. O kwenyere na ọ bụ ọgwụgwọ maka mgbu azụ. Echefu ọgwụgwọ anụ ahụ - chọta akpa rọba kama (gụọ: ọgwụgwọ ọrụ ebube maka mgbu azụ) wee tinye ya na akpụkpọ ahụ ebe ihe mgbu ahụ dị.
Onye ntinye ahụ kọọrọ na ọ na-agba mmiri na mpaghara ahụ - yana ọ na-agbapụkwa ihe mgbu na oge. Ohere a nwere ike dị ukwuu karịa na ihe na-akpata mgbu, ikekwe esemokwu ahụ ike, mere onwe ya jụụ. Mana anyị nwere ekele maka nka.
NHI - Nkọwa Ahụike Norway.
Bronfort et al. Ọkpụkpụ Spinal Manani, Ọgwụ, ma ọ bụ Mgbatị Homelọ Na Ndụmọdụ Maka Acute na Ahụhụ Subacute Neck. Ọnụọgụ Ọnwụnwa. Annals nke Medicinal esịtidem. Jenụwarị 3, 2012, vol. 156 Mba. 1 Akụkụ 1 1-10.
Health Directorate. Ahụike na-erite site na mmega ahụ. web: http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/velferdsgevinst-av-fysisk-aktivitet.aspx
NA-EGO. Ọrịa na-arịa ọrịa 2011. Web: http://www.nho.no/getfile.php/bilder/RootNY/filer_og_vedlegg1/Kostnader%20sykefrav%C3%A6r%202011%20siste.pdf
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị gbasara Oge mgbu:
Can nwere ike ịnweta gout na azụ?
gout na-adịkarị obere na azụ. Enweela ikpe dịpụrụ adịpụ ebe a hụrụ na kristal acid uric emeela ka lumbar stenosis, mana dịka m kwuru, nke a dị obere. 50% nke gout pụtara na mkpịsị ụkwụ ukwu. Mgbe ahụ ikiri ụkwụ, ikpere, mkpịsị aka na nkwojiaka na-eso 'nkịtị'. Dịka e kwuru, ọ dị obere na gout ga-eme n'azụ. Mana gout nwere ike inye ntọala maka akụrụ na akụrụ - nke nwere ike ibute ihe mgbu dị egwu.
Enwere ike iji ụfụfụ nyere m aka na azụ m?
Azịza: Ee, ụfụfụ ụfụfụ / ụfụfụ nwere ike inyere gị aka na akụkụ, mana ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na azụ gị, anyị na-akwado gị ka ịkpọtụrụ ọkachamara ahụike ọkachamara na usoro ọzụzụ na ị nweta atụmatụ ọgwụgwọ ruru eru na mmega ahụ akọwapụtara.
Enwerela ịgbatị na azụ ma ugbu a ọ na-afụ ụfụ iku ume. Kedu ihe ọ ga-abụ?
Ọ dị ka ị na-akọwa ihe a na-akpọ mkpọchi ọgịrịga - nke a bụ mgbe njikọ njikọta nke 'thoracic vertebrae' mkpọchi 'yana ngwakọta ọgịrịga (nkwonkwo ego). Nke a nwere ike ime na mberede ma nwee ike ịkpata ihe mgbu n'ime ubu ubu nke na-eme ka njọ site na ntụgharị nke ahụ dị elu yana site na iku ume miri emi. Ọtụtụ mgbe, ọgwụgwọ nkwonkwo yana ọrụ muscular site n'aka chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa na-enye aka nwere ike inye enyemaka mgbaàmà ngwa ngwa na ịrụ ọrụ arụmọrụ. A na-atụ aro ya ka ị na-eje ije ma na-agagharị n'ime ihe ị nwere ike.
Enwere radieshon ụkwụ ụkwụ mgbe ịda na azụ. N'ihi gịnị?
Zarị ọkụ na ịkụda ụkwụ nwere ike ịda site na iwe / ntụtụ megide akwara sciatic, mana enwere ike inwe ihe dịgasị iche iche mere mmadụ ji enwe ahụ mgbu na ụkwụ. O nwere ike ịbụ n'ihi ọrịa lumbar prolapse / lumbar prolapse / diski na-etinye nrụgide na mgbọrọgwụ akwara (nke na-agbada ụkwụ - nke a na-akpọkwa dermatomes) - ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ n'ihi ikpochi akwara (eg piriformis syndrome) nke na-etinye akwara. Ọ bụrụ na ịnwe radieshon na ụkwụ abụọ, ọ dị nwute na-enyo enyo na iwe / ntụtụ bụ nke etiti / etiti, na otu n'ime ihe kachasị kpatara nke a bụ nkwụsị diski etiti na nrụgide na mgbọrọgwụ akwara abụọ (yabụ radieshon na ụkwụ abụọ). Anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ onye dọkịta ma chọpụta mmerụ ahụ.
Agbadawo n'etiti etiti azụ. Gịnị bụ akụkụ nke azụ?
Ihe mgbu n’etiti ma ọ bụ n’etiti etiti azụ na-agakọ mgbu n'ime obi. Press ya gụkwuo g'ọ nụ.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji nwee mgbu azụ?
Azịza: Mgbu bụ etu ahụ mmadụ si ekwu na ihe adịghị mma. Ya mere, a ghaghị ịkọwa ihe mgbaàmà ihe mgbu dị ka ihe ọ pụtara na enwere ụdị nkwụsịtụ na mpaghara ahụ, nke a ga-enyocha ma dozie ya na ọgwụgwọ na mmega ahụ kwesịrị ekwesị. Ihe kpatara mgbu azụ nwere ike ịbụ n'ihi mbubata na mberede ma ọ bụ nwayọ nwayọ na-aga n'ihu, nke nwere ike ibute ọgbụgba akwara, nkwonkwo nkwonkwo, mgbakasị akwara na, ọ bụrụ na ihe agafeela, discogenic rash (sciatica)
Gini kwesiri ime na azu mgbu juputara na aru mgbu?
Azịza: muscle mara akpụ O yikarịrị ka ọ bịara n'ihi na mhapụrụ arụ nke uru ahụ ma ọ bụ ezighi ezi. Enwere ike inwe mgbatị ahụ ike na njikọta ihu na akụkụ nke anụ ahụ na akwara. Na mbido, ịkwesịrị inweta ọgwụgwọ ruru eru, wee nweta mmega ahụ akọwapụtara ka ọ ghara ịbụ nsogbu na - emegharị emechaa.
||| Ajụjụ ndị yiri ya nwere otu azịza: «Enweela akwara akwara n'akụkụ ala azụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme? "
Kedu ihe kpatara m ga-eji nwee mgbu azụ?
Azịza: Na ala azụ anyị na-ahụ vertebrae L5-S1, nke a ga-abụ mpaghara enweghị ike ma ọ bụrụ na ịnweghị akwara isi zuru oke ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ na nnukwu nrụgide na ndụ kwa ụbọchị. Ihe na-akpata mgbu nwere ike ịbụ n'ihi ihe ndị ọzọ, mgbu azụ, ahụ erughị ala, ihe kpatara ma ọ bụ mgbakasị akwara.
Mgbe ụfọdụ pịa ụda na azụ na mgbu. Olee ihe ọ ga-abụ?
Pị ụda ma ọ bụ cavitation na azụ bụ n'ihi mmegharị / mgbali mgbanwe na nkwonkwo facet (isi ihe mgbakwunye n'etiti nkwonkwo na azụ) - ndị a nwere ike ịme ụda ma ọ bụrụ na enweghi nsogbu na mpaghara chọrọ nlebara anya ụfọdụ. Ọ na-abụkarị n'ihi obere nkwado nkwado na mpaghara ahụ yana ihe akpọchiri mkpọchi njikọ (nke a na-akpọkarị 'mkpọchi') - anyị na-atụ aro ka ị nweta enyemaka na nsogbu nkwonkwo gị site na chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka wee nata ntuziaka ọzụzụ / omume a kapịrị ọnụ iji wusie mpaghara dị mkpa ike ụba nkwado / ike.
Emerụla m azụ n’azụ mgbe m na-arụ nnukwu ọrụ. Kedu ihe kpatara m ji ewute m n’azụ mgbe m na-arụ ọrụ?
Na-aza ajụjụ nke gị site n'ikwu na ị na-ebufe onwe gị oke - na-enweghị ikike zuru oke ime ya. Abụọ aro maka ihe ngwọta:
Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ọfịs mara mma, mgbe ahụ ịkwesịrị ịgbalịsi ike ịmachi oge ị na-etinye n'ụbọchị ọrụ. Mee obere ije ije oge ọrụ n'ụbọchị ọrụ gị, yana ịme mmega ahụ ọkụ.
Ọ bụrụ na ịnwere ọrụ dị arọ nke na-agụnye ọtụtụ iweli elu na ịgbagọ agbagọ, mgbe ahụ ị ga-amatarịrị na nke a ga - ebute mmerụ ahụ dị njọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike zuru oke na ọrụ na akwara na nkwonkwo iji mee ya. Nke a bụ ihe na - emekarị n’etiti ndị nọọsụ na ndị nọọsụ n’ụlọ n’ihi na ha na - eme mbuli elu na mberede ma ọ bụ rụọ ọrụ n'ọnọdụ dysergonomic na - adịghị mma.
Jørgine Liasen ekwu, sị:
N'ime ọnwa 1, a ga m enwe oge maka ịrụ ọrụ azụ nke isii na Ullevål. Añụrị na egwu. Na-atụ anya iwepụ ụfọdụ n'ime ihe mgbu m nwere taa ka m wee belata ihe dị mma na ọgwụ mgbu. A ga-enwekwa olile anya na ị ga-enwe ike ịgagharị ntakịrị ọzọ ma ghara igwu mmiri. (ee, m ga-akpachara anya…)
Mgbe ahụ, m na-atụ egwu ụbọchị mgbe ọrụ ahụ gasịrị, na-eteta n'ihi na m maara na ọ na-ewute elu igwe na mmalite ... Ma mgbe ahụ, m na-eche na nke a bụ n'ezie oge 6th ... prognosis dị njọ mgbe ọ bụla, na n'ihi na m na-enweghi chioma. na ihe ọhụrụ na-eme mgbe niile n'azụ.
Kedu mgbe ọ na-akwụsị?
jorun h. ekwu, sị:
Hi jørgine, M na-alụkwa na-adịghị ala ala mgbu… jisie na usoro gị !! olileanya na ọ na-aga nke ọma! Olileanya na ihe mgbu ga-akwụsị mgbe gị nke isii ịwa ahụ, ma ị nwere ike mgbe ijide n'aka .. a ga-enwe ọtụtụ scars anụ ahụ na mmerụ anụ ahụ na ndị dị otú ahụ arụmọrụ atte '.
Ndewo ugbu a, a na m eji Cymbalta 30 mg maka ụbọchị anọ. Akpọrọ dọkịta m wee sị na m ga-abawanye ruo 4 mg echi… Ihe mgbu m dị na azụ na mgbu anụ ahụ na afọ n'ihi azụ. Ma mgbe m dinara n'azụ m na-enwe nnukwu mgbu n'ime obi na gbadaa afọ dum ruo n'oke. Ọ nwere onye nwere ahụmahụ na Cymbalta maka mgbu azụ?
Mette Gundersen ekwu, sị:
Ndewo! Na-eche ma ọ dị onye nọ ebe a agbagoro na ebe nchekwa palexia?
M ga-akwụsị ịṅụ mbadamba nkume ndị a, ọ bụghị n'ihi na ha adịghị enye mgbu mgbu zuru oke, kama n'ihi mmetụta ndị dị na ya. Ọsụsọ na-agba m dị ka nsụda mmiri ma ọ bụ ifriizi ọkara ruo ọnwụ mgbe ahụ́ m ruru okpomọkụ. M na-aga na a ezi uche elu dose, 500 mg, ma ugbu a na ikpeazụ izu steepụ ala 400 mg.
Dọkịta m na-eche mgbe ụbọchị iri na anọ gachara, m ga-agbadata 14 mg ọzọ wee gaa n'ihu na ya, ruo mgbe m nọ na 100. Enwere m ihe mgbu na mgbu dị egwu, azụ m kwụsịrị kpamkpam na ụkwụ m n'ụkwụ aka ekpe m enweghị ike ịga n'ihu. Ihe mgbu niile na-abịa site na ịwa azụ dara ada (M na-akwa ụta!).
Echere m na mbelata na-aga ngwa ngwa, onye ọ bụla nwere ahụmahụ ??
Daalụ maka azịza ya ma ọ bụghị ya, a ga m achọ ka ị nweta ụbọchị dị mma nke m na-atụ anya na ọ bụghị oke mgbu…
Hais Draxen Jordhøy ekwu, sị:
Enwere m ntakịrị olile anya maka enyemaka ịchọta nyocha. Ọ dịghị onye na-achọpụta ihe ọ bụla. Nke ahụ pụtara na anaghị m enwe nkwarụ na-eto eto…
E merụrụ m ahụ n'ihe mberede ụgbọ ala mgbe m dị afọ iri na asatọ, bụ́ ebe m na-adalata ma tie m isi nke ọma. A wara m ahụ n'ime ọnwa 18 ka e mesịrị maka mwepu, ebe m nwere mmebi akwara na azụ azụ. Ọ na-eme ka ọ na-afụ ụfụ kwa ụbọchị na ụkwụ (ọtụtụ n'ime ụkwụ aka nri) ụdị stitches wdg Mgbe ụfọdụ, m na-eteta na elu ruo kpamkpam kpọnwụrụ akpọnwụ ụkwụ. Mgbe ụfọdụ otu ụkwụ, oge ọzọ ma. Ha na-emezi ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ruo awa 6 / nke ahụ bụ ndekọ dị ugbu a).
N'afọ 2005, amalitere m ịda mbà. Ọ bụ ebe ọ bụla na oge ọ bụla. O nweghị ihe jikọrọ ya na ibili ngwa ngwa, ma ọ bụ otú ike gwụrụ m (ọ bụ ezie na ọ na-emekarị mgbe ahụ). Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ m na-enwe mgbagwoju anya mgbe niile n'ihi ya. Anyị amaghị ihe mere nke a ji eme. Emeela ule maka Akwụkwụ na-adọ, ma ọ dịghị ihe ọ bụla (ha kwuru na ọ pụtaghị na m enweghị ya, naanị na ọ dịghị eme n'oge ule. M nwere ike zone si mgbe ụfọdụ, ebe m mgbe ahụ adịghị echeta ihe ọ bụla nke ihe. emeela tupu m ebie akwụkwọ m, ọ dị oke egwu.
Ọ bụrụ na ị ghọtaghị nke ọ bụla n'ime ihe a, aghọtara m nke ọma, mana ikekwe ị maara onye m nwere ike ịkpọtụrụ. Enwere m ike ikwu na azụrụla m usoro Redcord wee jiri ya zụọ ya. (n'agbanyeghị na m dị ntakịrị njọ na ya, dịka m maara na ọ na-arịa m nke ukwuu)
Ọ na-ada nke ukwuu, na-agwụ ike na nkụda mmụọ. Kedu maka ụtarị? Ọ ghaghị ịbụ na ọ mere n'ihe mberede ụgbọ ala ime ihe ike dị otú ahụ? Ma ọ bụ na e lekwaghị anya na nke a? a maara na nke a nwere ike ibute ọtụtụ mmerụ ahụ nke 'fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụ anya'.
haisjo ekwu, sị:
Ọfọn, enweghị m olu olu ma ọlị, mana m na-echeta otu okpu dị warara na windo akụkụ. A naghị elekwasị anya na ya ugbu a. M gbagọrọ agbagọ m azụ sharply na mberede, ma n'oge m na-adịghị prolapse (nwetara a ọhụrụ otu mgbe ọrụ, ma ọ shrunk). Malite inweta shit na nhọrọ. Hehe.
Ma eleghị anya ị nwarala ọtụtụ ọgwụgwọ na ọgwụgwọ? Ọ bụrụ otú ahụ, nweere onwe gị idepụta ihe ị nwara na mmetụta ọ nwere.
Were ụyọkọ ule, mana enweghị ike ịnweta physio na enweghị ike imeli ya onwe m. Ugbu a, m na-aga n'ihu ngwakọta nke tramagetic od, nerontine, meloxicam, maxalt na mgbe ụfọdụ solpedeine (mbadamba effervescent Bekee). Nke ikpeazụ na-ewere ihe niile, codeine prep.
Emeela ule obi, ule epilepsy, mr…. Meh! Agara m na slide ọhịa na ịdị mma wee gwa ụlọ ọgwụ mgbu na Hønefoss okwu. Ọ dịghị onye nwere echiche ọ bụla ihe mere m ji ada etc. Ya mere ugbu a ọgwụ bụ ndụ m.
Uff! : / Ọ naghị ada ụda. Mana ị naghị enweta physio kpuchiri ya na onyinye ọrụ ọha, kwa?
Mba, ọ dịghị ihe na-ekpuchi ekpuchi dị mwute. Ọfọn, oge ikpeazụ m tinyere akwụkwọ, a jụrụ m. Ugbu a, ọ bụ nwa oge.
ewute ekwu, sị:
Ọ dị mma, ọ ga-adị mma ịlele ya ọzọ site na GP gị. Dị ka a maara nke ọma, e nwere ụfọdụ nchoputa na X-ray na ihe ndị yiri ya nwere ike ime ka ị ruo eru maka mbelata mbelata.
Bjørg ekwu, sị:
Nnọọ. Mgbe afọ 15 na-enwe nsogbu azụ na ụkwụ aka ekpe, enwere m ịwa ahụ 4 afọ gara aga. Mgbe otu afọ gasịrị, a wara m ahụ́ ọhụrụ, mgbe ahụ, agbasiri m ike. Ugbu a enwere m nkwarụ, enwekwara m nsogbu n'ụkwụ na azụ m. Ụkwụ dị umengwụ, tingling, ọ na-ebi n'ime ụkwụ, mgbu, isi ike na obere mmegharị gburugburu nkwonkwo ụkwụ. Azụ m na-eche, ike na-agwụkwa m ngwa ngwa. Ụfọdụ nsogbu dị n'akụkụ aka nri nke azụ na ala apata ụkwụ. Ịkwụ ọtọ na ịnọdụ ala na-akpatara m nsogbu. Ụbọchị na-aga nke ọma, na ohere ị dinara ala. Mgbe o ruru mgbede na abalị, a na m enwe ọtụtụ ihe mgbu n’ụkwụ m. Na-aga na Celebra na Nevrontin na ohere iji mejuo Tramadol. Ịga ije n'ime ọhịa na ubi, ọzụzụ ike na physio na igwu mmiri na ọdọ mmiri ọkụ. Enwere m ekele maka ndụmọdụ ụfọdụ dị mma. Nwanyị, 55 afọ
FYI: E nwetara nkwupụta a site na ọrụ ajụjụ anyị na Facebook.